प्रकाशित २०७५ पौष ८ आइतबार
काठमाडौं । सन् २०१८ स्मार्टफोनको हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण रहनपुग्यो । यो अवधिमा धेरै कम्पनीहरुले उत्कृष्ट फिचर्सहरुको साथमा केही महत्वपूर्ण स्मार्टफोनहरु अघि सारे । जसमध्ये केही आकर्षक स्मर्टफोनहरु पनि यस वर्ष बजारमा आएका छन् । जसमध्ये केही यस्ता छन् –
१. सामसुङ ग्यालेक्सी एस९प्लस
सामसुङ ग्यालेक्सी एस९ प्लस यस वर्ष सार्वजनिक भएको सबैभन्दा आकर्षक स्मार्टफोनमध्येको एक हो । पछाडि सिसाको कभर, कर्भ डिस्प्लेले यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ ।
३. वान प्लास ६टी
वानप्लस ६टीको थन्डर पर्पल भेरियन्ट यस वर्षको आकर्षक स्मार्टफोनमध्येको हो । यो स्मार्टफोन वानप्लस ६टी आएको केही समयपछि सार्वजनिक गरिएको हो । यो ग्रेडियन्ट कलरमा ल्याइएको कम्पनीको पहिलो स्मार्टफोन हो ।
एप्पलको आईफोन एक्सएस म्याक्स पनि यस वर्ष सार्वजनिक भएका स्मार्टफोनमध्ये आकर्षकको सूचीमा परेको छ । यो स्मार्टफोनमा प्रयोग गरिएको अगाडि र पछाडिको सिसा र रङको फरकले यसलाई थप आकर्षक बनाएको छ ।
एप्पलको अर्को उत्पादन आईफोन एक्स आर पनि आकर्षक स्मार्टफोनको सूचीमा अटाएको छ । यो आईफोन प्रयोग गर्न निकै सजिलो छ । यसमा पनि पछाडिको भागमा सिसा प्रयोग गरिएको छ । धेरै रङहरु प्रयोग गरिएको छ । जसमा निलो र रातो रङ विशेष आकर्षक देखिन्छन् ।
६. गुगल पिक्सेल ३एक्सएल
गुगलले अघिल्लो वर्षको मोडलजस्तै नयाँ मोडल यस वर्ष सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि यो मोडल केही पातलो र केही विशेष फिचर्सहरु थप गरिएको स्मार्टफोन हो ।
केही समयअघि मात्र सार्वजनिक गरिएको यो स्मार्टफोन निकै आकर्षक ढङ्गले निर्माण गरिएको छ । पछाडि प्रयोग गरिएको सिसा र किनारा घटाइएसँगै यो स्मार्टफोन पनि राम्रो देखिएको छ ।
८. ओप्पो आर१७ प्रो
यो स्मार्टफोन पनि केही समयअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । यसमा प्रयोग गरिएको ग्रेडियन्ट कलरले यसको शोभा बढाएको छ । यो स्मार्टफोन दुई रङमा बजारमा आएको हो ।
९. भिभो भी११ प्रो
१०. अनर ८एक्स
अनर ८एक्स स्मर्टफोन हुवावेको पी सेरिज जस्तै रहेको छ । यो स्मार्टफोन पनि वर्षको आकर्षक स्मार्टफोनको सूचीमा परेको छ ।